Musangano weKimberley Process Unotanga muWashington DC
Musangano weKimberly Process wekuzeya kutengeswa pamwe nekucherwa kwemangoda akachena, watanga neMuvhuro muWashington DC.
Musangano uyu uri kuitirwa muAmerica nekuti nyika iyi ndiyo sachigaro weKimberley Process wegore ra 2012. Sachigaro weKimberley Process, Ambassador Gillian Milovanovic, ndivo vachange vachikokera musangano wemazuva mana unopera neChina.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti musangano uyu unofanirwa kuongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuminda yemangoda kwaMarange, uko rinoti kuri kuramba kuchienderera mberi.
Gurukota rezvemigodhi, VaObert Mpofu, ndevamwe vevari kupinda mumusangano uyu.
Vamwe vakuru vakuru vakauya kumusangano uyu vanosanganisira muchuchisi wenyika, VaJohannes Tomana, pamwe nasachigaro weZimbabwe Mining Development Corporation, VaGodwills Masimirembwa.
VaMpofu vanoti nyika dzakaita seAmerica neBritain dziri kutadzisa Zimbabwe kutengesa mangoda ayo pamisika yepasi rose nepamusana pezvirango zvayakatemerwa nenyika idzi.
VaMpofu vanotiwo havasi kuzobvumidza musangano uyu kuti ukurukure nyaya yekodzero dzevanhu, asi kuti unangane nenyaya dzekutengeswa kwemangoda zvakanaka pasi rose.
Vemasangano akazvimirira vari kupinda mumusangano uyu vanosanganisira mukuru we Centre for Research and Development, VaFarai Maguwu, pamwe nenhengo yeZimbabwe Environmental Lawyers Association, VaShamiso Mutisi.
VaMutisi ndivo zvakare mumiriri wemasangano akazvimirira emuZimbabwe musangano reKimberley Process.
Nyanzvi munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, uye vachitevera zvakadzama zviri kuitika kuminda yemangonda kwaMarange, VaDewa Mavhinga, vanoti Kimberley Process inofanirwa kusimbaradza danho rayo panyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwaMarange.
VaMavhinga, avo vanoshanda nesangano re Crisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica, vanoti kodzero dzevanhu dzichiri kutyorwa kwaMarange uye Kimberley Process ndiyo chete inokwanisa kumisa izvi kana ikaomesera Zimbabwe.